राष्ट्रिय प्रसारणमा थपियो ६.६ मेगावाट विद्युत् - Mardi News
पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रम बढेको छ । सोही क्रममा निजी क्षेत्रको लगानीमा लमजुङमा निर्माण भएको रुदीखोला–बी जलविद्युत आयोजनाले आजदेखि विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ ।
कूल छ दशमलव छ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विद्युत्गृह लमजुङको क्वहोलाछार गाउँपालिका–५ सिन्दीमा छ । विन्दवासिनी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली स्थानीय मिजुरेडाँडा सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको हो ।
१५ दिनसम्म परीक्षण प्रसारणका रुपमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । सो अवधिभर सरकारले बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्दैन । परीक्षण प्रसारणको अवधि सकिएपछि व्यावसायिक उत्पादन शुरु हुने विन्दवासिनी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । निर्माण शुरु भएको करीब दुई वर्षमै उत्पादन थालेको उक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत रु १८ करोड पुगेको कम्पनीका सचिव जनार्दन अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
विन्दवासिनीले नै निर्माण गरेको ८।८ मेगावाटको रुदीखोला–ए जलविद्युत् आयोजनाले गत वर्षको चैतदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएको छ । यस्तै कूल ४८।८ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनामा पनि विन्दवासिनी समूहले लगानी गरेको छ ।
Previous ब्रेक्जिट: यस्ता छन् ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिएपछि यूके बस्ने नेपालीलाई पर्ने असरहरू
Next पंक्षी अध्ययनका लागि आधारभूत तालिम
ट्रेकिङ्ग गाइड एसोसिएसन अफ नेपाल (टिगान)का अध्यक्ष अस्वस्थ
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १३:४२ मर्दी न्यूज
कर्णालीमा सुरक्षाकर्मीसहित थप ७५ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या १९८ पुग्यो
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १२:४६ मर्दी न्यूज
भीम अस्पातालबाट निको भएर २५ जना घर फर्किए
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १२:२० मर्दी न्यूज
गण्डकी प्रदेशसभा बैठक LIVE !
प्रतिनिधि सभा बैठक LIVE!
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:३० मर्दी न्यूज
१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:२६ मर्दी न्यूज